November 2009 – Page2– အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Glimpses on Translations in Burmese Literary World
၂၀ဝ၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ထုတ် ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ဆရာမောင်ခိုင်လတ်က “ဘာသာပြန်တိုင်း ကောင်းရဲ့လား”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ယနေ့ မြန်မာစာပေနယ်၏ ဌာနခွဲ တစ်ခုဖြစ်သော ဘာသာပြန်ပိုင်းမှ ထင်သလို လုပ်နေကြ မှုများကို သုံးသပ်တင်ပြထားပါသည်။ ဆရာမောင်ခိုင်လတ်၏ ဆောင်းပါ အား ရာနှုန်းပြည့်သဘောတူရန် မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ရာနှုန်း အတော်များများမှာမူ စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါသည်။
ထိုအထဲမှာမှ ဘာသာပြန်စာပေနယ်တွင် မဖြစ်ညစ်ကျယ် စွတ်ကယ် စွတ်ကယ် ပါဝင် ရေးသားလျက်ရှိသော ကျွန်တော့်အနေဖြင့်လည်း ပြောချင်တာလေးတွေ အနည်းအပါး ရှိလာရပါသည်။
အချိန်ကာလကိုတော့ အတိအကျ မမှတ်မိတော့ပါ။ လေး၊ ငါးလတော့ ကြာခဲ့ပြီထင်ပါသည်။ ဆရာစံတိုး ကွယ်လွန်းခြင်းနှစ်လည်အတွက် နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာ၌ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုက လှူဒါန်းသည့် အလှူမှာ ဆိုတာတော့ သေချာပါသည်။
ဆရာ မောင်မိုးသူက ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းတွင် ဝင်ထိုင်ရင်းက ကျွန်တော့်ကို တခုတ်တရ ပြောပါသည်။
“ခင်ဗျား သိအောင် ပြောရဦးမယ်။ ဟစ်လရီကလင်တန်ရဲ့ ကိုယ်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိကို (…)နဲ့ (…)တို့ကလည်း ဘာသာပြန်ကြလိမ့်မယ်တဲ့”
ကျွန်တော် တွေသွားရင်းက ဘကြီးမိုးကို ပြန်ပြောလိုက်မိပါသည်။
“ဒါဆို ကျွန်တော် ရပ်ပေးလိုက်ရင် ကောင်းမလား ဆရာ”
“ဘာဆိုင်လို့ ရပ်ပေးရမှာတုံးဗျ။ ခင်ဗျားက အရင် ရေးနေတာပဲဟာ”
မှန်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် “ရှင်သန်ဆဲသမိုင်း၊ သို့မဟုတ် ဟစ်လရီ ကလင်တန်၏ ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း”မည်သော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် “သရဖူ”မဂ္ဂဇင်းတွင် အခန်းဆက်အဖြစ် ဖော်ပြနေခဲ့သည်မှာ နှစ်လပင် ရှိနေပါပြီ။
သို့သော် ကျွန်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားရပါသည်။ သည်လိုစာအုပ်မျိုးကိုမှ သွားဘာသာပြန်မိလေခြင်းဟုလည်း တွေးလိုက်ရပါသည်။
ကျွန်တော် ရပ်ပေးလိုက်ရမလားဟူသော မေးခွန်းမှာ တကယ့် ရင်ထဲက လာသော မေးခွန်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ထဲတွင်လည်း တအုံနွေးနွေး ဖြစ်နေသည်မှာ ကြာပါပြီ။
တခြားသူတွေ ဘာကြောင့် ဘာသာပြန်တာလဲတော့ ကျွန်တော်လည်း သူတို့ ဝမ်းထဲ ဝင်မကြည့်နိုင်သဖြင့် မသိပါ။ တစ်သက်လုံးမှာမှ ဘာသာပြန် စာအုပ် ငါးအုပ်ပြည့်အောင်ပင် မဖတ်ဖူးသူ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဘာသာပြန်ဖြစ်နေသည်မှာကား အစားကောင်းစားရသည့်အခါ ရင်းနှီးသူ မိတ်ဆွေများကိုလည်း မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်သည့် စေတနာ သက်သက်မှတစ်ပါး အခြားမရှိပါ။
ဟစ်လရီကလင်တန့် ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုလည်း ထိုစိတ်ဖြင့် ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်သည် အလွန် စာရေးပျင်းလှသူတစ်ဦး ဖြစ်လေသည့် အားလျော်စွာ မိမိကိုယ်မိမိ တွန်းသည့်အနေဖြင့် မဂ္ဂဇင်းမှာ အခန်းဆက် ထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သည့်အတွက် သည်စာအုပ်ကိုဖြင့် ကျွန်တော် ပြန်ဆိုနေပါပြီဟု စာနှင့်ပေနှင့်၊ လူသိရှင်ကြား အခိုင်အမာ အသိပေးလိုက်ရာ ရောက်သွားမည်ဟုလည်း ယူဆမိပါသည်။
ယခု ဆရာမောင်မိုးသူက ကျွန်တော့်အား စေတနာနှင့် အသိပေးလာသောအခါတွင်တော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အတော် မချမ်းမြေ့တော့ပါ။
ကျွန်တော့်မှာ စာအုပ်စာတမ်း မကြွယ်ဝသော်လည်း မပါးရှားပါ။ ထို့အတူ ပင်ကိုရေးအဖြစ် ရေးမည်ဆိုလျှင်လည်း ရေးစရာတွေက အနမ တဂ္ဂ။ ထို့အပြင် လုပ်စရာ သုတေသနတွေကလည်း သည်တစ်သက် မကုန်နိုင်အောင် အပုံလိုက် ရှိနေသေးရာ ကျွန်တော့်မှာ ရေးစရာချည်း။
ဘာသာပြန်သည်မှာ ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်တွင် အပမ်းဖြေရင်း ဖတ်မိရာမှ ကိုယ်တိုင် သဘောတွေ့သွားသော စာများကို အလွယ်တကူ ပြန်ဆိုလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာတစ်အုပ်ကို သူ့ထက်ငါ အလုအယက်ပြန်ဆိုမှ ရေးစရာရမည့်အထဲတွင် ကျွန်တော် အပြည့်အဝ မပါနိုင်သေးဟု ယူဆပါသည်။
စာတစ်အုပ်ကို စာရေးသူအများ အလုအယက်ပြန်ဆိုခြင်းကြောင့်…
(၁) အဆိုပါ စာရေးသူများ၏ အင်အားနှင့် အချိန်များ အလဟဿ ပြုန်းတီးသွားပါသည်။
စာတစ်အုပ်ကို ဘာသာပြန်သည့်အခါတွင် သေချာသည်ကတော့ အချိန်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဘာသာပြန်သူ၏ ဦးနှောက်ကို စိုက်ထုတ်သုံးစွဲရပါသည်။ သူတစ်ပါးပြန်ပြီးသား၊ သို့မဟုတ် သူတစ်ပါး ပြန်ဆိုနေသည့် စာအုပ်ကို ပြန်သည့်အခါ တစ်ယောက်တည်းနှင့် နိုင်သည့် အလုပ်တစ်ခုကို တစ်ယောက်မက ဝိုင်းလုပ်သလို ဖြစ်သွားပါသည်။ ထိုအခါ မလိုအပ်ဘဲ အင်အားပြုန်းတီးပါသည်။ အချိန်ပြုန်းတီးပါသည်။
(၂) စာဖတ်သူများအတွက်လည်း စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှပါသည်။
စာအုပ်တစ်တအုပ်တည်းကို လူအများ ပြန်ဆိုထားသည့် စာအုပ်များထွက်လာသောအခါ ဘယ်သူပြန်တာ ဖတ်ရင်ကောင်းမလဲဟူသော ပြဿနာမှာ စာဖတ်သူတိုင်း စဉ်းစားရသော ပြဿနာဖြစ်လာပါ သည်။ သည်လူတွေကလည်း ဘာလို့ သည်တစ်အုပ်တည်းကို ဝိုင်းပြန်နေကြတာလဲမသိဘူးဟူသော အတွေးမှာလည်း စာဖတ်သူတိုင်း၏ ခေါင်းထဲတွင် ပေါ်ပါသည်။ သည်တစ်အုပ်တည်း ဝိုင်းပြန်ကြမယ့်အစား တခြား တစ်အုပ်အတွက် အချိန်ပေးလိုက်ရင် မူရင်းစာအုပ်ကို မဖတ်နိုင်တဲ့ ကျုပ်တို့တွေအတွက် ဖတ်စရာ တစ်အုပ် ပိုတိုးမလာပေဘူးလား၊ တော်တော် ဦးနှောက်မရှိတဲ့လူတွေပဲဟု ကျွန်တော့်ကို အတိအလင်းပြောဖူးသည့် စာဖတ်သူများနှင့် ဆုံဖူးပါသည်။
ထိုနှစ်ချက်ကြောင့် ဆရာမောင်မိုးသူက ဟစ်လရီ့စာအုပ်အကြောင်း ကျွန်တော့်ကို ပြောလာသောအခါ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားရပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာတော့ ဆရာမောင်မိုးသူ ပြောသွားသည့် ဆရာနှစ်ဦးအနက်မှ တစ်ဦးက ထိုစာအုပ်ကို သူ ဘာသာပြန်နေပါကြောင်း သူ့ရှင်းလင်း ဖြေကြားချက်တွင် ထည့်သွင်း ပြောဆိုသွားသည်ကို ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော့် အခန်းဆက်က ခြောက်လမြောက်သို့ပင် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။
“သရဖူ”တာဝန်ရှိသူများကိုလည်း ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် စိတ်ပျက်နေသည့်အကြောင်း ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့က မဆိုင်ပါ။ သူတို့ မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးစရာ ရှိတာသာ ရေးပါဟု ဆိုသည့်အပြင် စာအုပ်ဖြစ်လာသည့်အခါတွင်လည်း သူတို့စာအုပ်တိုက်ကပင် ထုတ်ပါမည်ဟု ပြောပါသည်။ ကျွန်တော်ကမူ တစ်စက်ကလေးမှ မပျော်တော့ပါ။
ကျန်သူတွေကတော့ ဘာစိတ်နှင့်မှန်း မသိပါ။ ကျွန်တော် မပျော်တာကတော့ အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သည့် အချက်နှစ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်အချိန်နှင့် အင်အားကို လူတကာ ဝိုင်းပြန်ချင်စိတ်ပေါက်နေကြသော ထိုတစ်အုပ်အတွက် အခြောက်တိုက် အပြုန်းတီးခံနေသည်ဟု တွေးမိရသောကြောင့် မပျော်ပါ။ စာဖတ်ပရိသတ်ကို အထူး အားနာမိသဖြင့်လည်း မပျော်ပါ။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် စိတ်နှလုံးလည်း ဒုံးဒုံးချထားလိုက်ပါသည်။ နောင်လွဲနောင်ခါ ဘယ်ဘယ်သောအခါတွင်မှ ထိုသို့ လူတကာ ဝိုင်းပြန်လောက်သည့် စာအုပ်ကို ကျွန်တော် မည်မျှ သဘောကျနေနေ ပြန်ဆိုဖို့ လုံးလုံးစိတ်မကူးတော့ပါ။ ထိုအလုအယက်တွေကြားထဲမှာ ညပ်နေရသည် အဖြစ်ကို လွန်စွာ ရှက်နေမိပါသည်။ စာဖတ်သူများကိုလည်း အားနာနေမိ ပါသည်။
“စိတ်နှလုံးတိုက်ကျွေး ကြက်စွပ်ပြုတ်လေး”မည်သော စာအုပ်တွေ ရောင်းကောင်းလှမှန်း၊ ပလူပျံအောင် ထွက်နေမှန်း ကျွန်တော် မသိခဲ့ပါ။ ဖိလစ်ပိုင်သူတစ်ဦးက ကျွန်တော့်ထံ ပို့လိုက်သော ဓာတ်ချောစာလေးတွေတွင် ပါလာသော ပုံတိုပတ်စလေးများမှာ ဖတ်လို့ကောင်းလှသဖြင့် ယင်းတို့ကို ဘာသာပြန်ကာ ဂျာနယ်တစ်စောင်သို့ ပေးခဲ့ပါသည်။ လေး၊ ငါးပုဒ် ဖော်ပြအပြီးမှာမှ ထိုစာမျိုးများကို “ကြက်စွပ်ပြုတ်”စာအုပ်တွဲတွင် ဖော်ပြ လေ့ရှိကြောင်း သိလာရပါသည်။ စာဖတ်သူတစ်ဦးက ထိုအပတ်တွင် ပါသောအပုဒ်မှာ ဆရာဖေမြင့်၏ နှလုံးသား အာဟာရ စာအုပ်ထဲတွင်လည်း ပါရှိသော အပုဒ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောလာသဖြင့် သိလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သေချာမေးကြည့်သောအခါ တင်ပြပုံခြင်းမတူပါ။ ဆရာဖေက အခန့် ရေးကာ အတိအကျ ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်က အရွှင်ရေးကာ မူရင်းတွင် ကျွန်တော့်အတွေးတွေပါ နှောလျက် ဖြည့်စွက်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ဟာက ဘာသာပြန်ရုံသာမက နောက်က ကျွန်တော့် အာဘော်နှင့် သုံးသပ်ချက်များပါ ပါနေပါသည်။
ထိုစာတိုလေးများ အပုဒ်၃၀ပြည့်သောအခါ စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ထိုစာအုပ်ထုတ်ဝေပြီး များမကြာမီ ထွက်လာသော “ဆယ်ကျော်သက်” မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာမ မြနှောင်းညိုက ထိုစာအုပ်ထဲမှ ပထမဆုံးအပုဒ်ကိုပင် သူ့စကားနှင့်သူ ပြန်ရေးထားသည်ကို ဖတ်လိုက်ရသည်။ ဆရာမ ကျွန်တော့်စာအုပ် ရှိမှန်းပင် သိမည် မဟုတ်သည်ကို ကျွန် တော် နားလည်ပါသည်။ သူသည်လည်း တစ်နေရာရာမှာ ဖတ်လိုက်ရတာလေးကို ကြိုက်သဖြင့် မြန်မာပရိသတ်အတွက် ရေးလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကျတော့ ဉာဏ်ချင်း ထပ်သည်ဟု မပြောနိုင်ဘဲ အကြိုက်ချင်း တူသွားသည်ဟုသာ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော် စတင် ရေးဖြစ်ခဲ့စဉ်ကလည်း စာတစ်အုပ်ဖြစ်အောင် မရည်ရွယ်ခဲ့ဘဲ ဂျာနယ်တစ်ပုဒ်စာသာ ဖြစ်သည်။ ဆရာမကလည်း မဂ္ဂဇင်း တစ်ပုဒ်စာသာဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ အင်အား ပြုန်းတီးသည်ဟု ဆိုဦးတော့ သိပ်ထောင်းတာလှသော ပြုန်းတီးမှု မဟုတ်ပါ။
နောက်တစ်ချက်မှာ ဆရာဖေမြင့်နှင့် ကျွန်တော်၊ ကျွန်တော်နှင့် ဆရာမ မြနှောင်းညိုတို့ ထိုအပုဒ်တိုလေးများမှာ ထပ်နေကြရာတွင် ကိုယ့်လေနှင့် ကိုယ်၊ ကိုယ့်အာဘော်နှင့် ကိုယ် ကျွန်တော်တို့ သုံးဦးစလုံး ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆိုခဲ့ကြသည့်အချက်မှာမူ ဘယ်သူနှင့်မှ သင်္ကာရှင်းစရာ၊ တောင်းပန်စရာ မလိုလောက်အောင် သေချာနေတာလည်း အမှန်ပင်။
ကျန်ပါသေးသည်။ ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် အခန်းဆက် ပြန်ဆိုဖော်ပြခဲ့သော ကျွန်တော့် “အာရှသားတွေ စဉ်းစားတတ်ကဲ့လား”မှာလည်း ထိုမတိုင်မီကတည်းက ဆရာ“ကိုတာ” မဟေသီမဂ္ဂဇင်းတွင် ဖတ်ပြီး ပြန်ရေးထားမှန်း ဆရာတာက ပြောသဖြင့် သိရပါသည်။
ဖြစ်ပုံက သည်လို။ ထိုဂျာနယ်ကို မပေးမီ “စတိုင်သစ်”မဂ္ဂဇင်းအတွက် ဆရာတာက စာမူတောင်းသဖြင့် ကျွန်တော် ထိုစာမူကို ပေးမည်ဟု ပြောလိုက်ပါသည်။ ထိုစာမူက ကျွန်တော့်လက်ထဲတွင် ပြန်ဆိုပြီး အသင့်လည်း ရှိနေပါသည်။ ကျွန်တော်က မူရင်းအက်ဆေး၏ ခေါင်းစဉ်ကို ပြောပြလိုက်သောအခါ ဆရာတာက “ကျုပ် ရေးပြီးသားကြီးဗျ”ဟု ပြောသဖြင့် ကျွန်တော့်မှာ အတော်မအီမလည် ဖြစ်သွားရပါသည်။
ကျွန်တော် အပင်ပန်းခံကာ ပြန်ဆိုထားသည်ကိုလည်း နှမျောသွားပါ သည်။ သို့သော် ဆရာတာ ရေးထားမှန်း ကျွန်တော် မသိလိုက်သကဲ့သို့ပင်၊ ဆရာတာ့ စာကို မဖတ်လိုက်ရသည့် စာဖတ်သူများလည်း ရှိနေနိုင်သေးသည်ကို တွေးမိရပါသည်။ အလားတူပင်၊ ဂျာနယ်ပရိသတ်နှင့် မဂ္ဂဇင်း ပရိသတ်တို့ မတူသည်ကိုလည်း သတိထားမိနေပါသည်။ ဂျာနယ်ပရိသတ်က အင်အားလည်း ပိုများပါသည်။
သို့ဖြစ်သဖြင့် ဆရာတာက “ကျုပ်ရေးပြီးသား”ဟု ပြောထားသည့်ကြား ကပင် သိသိကြီးနှင့် ထိုဂျာနယ်ကို ကျွန်တော် ပေးခဲ့ပါသည်။ ဂျာနယ်ကလည်း ဖော်ပြပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အတော်ကြီး ကြာတော့မှ မဟေသီမဂ္ဂဇင်းပါ ဆရာတာ့ “ကျုပ်ရေးပြီးသားကြီး”ကို ဖတ်မိရပါသည်။ ထိုအခါတွင်ကား ဂျာနယ်ကို သိသိကြီးနှင့် ပေးဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက် နောင်တမရတော့ပါ။ ဆရာတာက မူရင်းအက်ဆေးကို ကျွန်တော့်လို လုံးစေ့ပတ်စေ့ ဘာသာပြန်ထားတာ မဟုတ်ပါ။ မူရင်းကို ဖတ်ပြီး သူ့စိတ်ကူးနှင့်သူ ပြန်ရေးပြထားခြင်း ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသောအခါ အတော် ခံသာသွားပါသည်။
ထို့နောက်ပိုင်း ထိုစာအုပ်တွင် ပါဝင်သော အခြားဆောင်းပါးများကို ဆက်လက်ပြန်ဆိုနေမိရာ ဆရာကိုတာကပင် ကျွန်တော့်အား သတိပေးပါသည်။
“ဟေ့လူ… ကြည့်လည်း လုပ်ဦး။ ကျော်ဝင်း (ဆရာကျော်ဝင်း) လည်း အဲဒီ့ထဲက ဟာတွေ လုပ်နေတယ်ဗျ”တဲ့။
ကျွန်တော်ကား မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်စုံအောင် ဖတ်နိုင်သူ မဟုတ်ပါ။ စာအုပ်ဆိုင်များသို့လည်း တစ်နှစ်နေလို့မှ တစ်ခါ မရောက်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဆရာကိုတာနှင့် သိပ်ထဲထဲဝင်ဝင် မသိခင်က ဆရာ“ကျော်ဝင်း”ကို စာရေးသူမှန်းပင် ကျွန်တော် မသိခဲ့ပါ။ အဲသလောက် အခြေအနေ ဆိုးပါသည်။ ဆရာကျော်ဝင်းကိုပင် မသိမှတော့ ဆရာကျော်ဝင်း ဘာတွေ ရေးလို့ ရေးနေမှန်း မသိတာလည်း မဆန်းပါ။
သို့သော် ဆရာတာ့စကားကြောင့် ကျွန်တော် ကိုယ်ရှိန်သတ်ခဲ့ပါသည်။ မနှစ်က ထိုစာအုပ် ဒုတိယအကြိမ်ထုတ် ထွက်လာပြီး အက်ဆေးသစ်များ ဖြည့်စွက်ထားသည်ကို တွေ့တော့မှ ထိုအက်ဆေးများကို စိတ်သန့်သန့်နှင့် မဟာဂျာနယ်တွင် ပြန်ဆိုဖော်ပြဖြစ်သွားပါသည်။
တစ်ပိုင်းက စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ပိုင်းက စာတိုပေစကို ဘာသာပြန်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် လုံးချင်းအတွက် ပြန်ဆိုခြင်းနှင့် မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်အတွက် ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
စာတစ်အုပ်ကို တစ်ယောက်ထက် ပိုပြီး ဘာသာပြန်ခြင်းသည် အစတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့် မဖြစ်သင့်ဟု မြင်ပါသည်။ တစ်အုပ်တည်းကို တစ်ယောက်မက ဘာသာပြန်မည့်အစား သူတစ်ပါးပြန် နေမှန်းသိလျှင် ထိုစာအုပ်ကို လက်ရှောင်ကာ တခြားတစ်အုပ်ကို ပြန်ဆိုမည်ဆိုပါလျှင် စာဖတ်ပရိသတ်အ များစုအတွက် အလွန်တရာ အကျိုးများ လိမ့်မည်ဟု မြင်ပါသည်။
သို့သော် သည်နေရာမှာ တစ်ချက်က မှောင့်ပါသည်။
ထုတ်ဝေသူ၏ပြဿနာဖြစ်သည်။ ဒါလည်း ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးပါသည်။
စာအုပ်တိုက်ကြီးတစ်တိုက်က သရဖူမဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ကျွန်တော့် အိမ်ထောင်ရေး ဆောင်းပါးများကို စုထုတ်ချင်သည်ဟု ပြောပါသည်။ ကျွန်တော်က အင်တင်ပါတင် ဖြစ်နေပါသည်။ အဓိကကတော့ ပြန်ရှာပြီး စုပေးရမှာ အပျင်းထူခြင်း သက်သက်သာ ဖြစ်သည်။ ထုတ်ဝေသူက ကျွန်တော့်ကို တွေ့တိုင်း လောဆော်တတ်သလို ကျွန်တော်ကလည်း တွေ့တိုင်း အင်တင်ပါတင် လုပ်နေခဲ့မိပါသည်။
ကြာတော့ ထုတ်ဝေသူခမျာ စိတ်ရှည်ဟန် မတူတော့ပါ။ ကျွန်တော် ထုံ့ပိုင်း ထုံ့ပိုင်းနှင့် ပြန်ဆိုရေးသားနေသော အိမ်ထောင်ရေး စာအုပ် တစ်အုပ်ကို ယူချလိုက်ကာ ဟာသအတိုအထွာတွေကို ပြန်ဆိုေ ရးသားနေသည့် ဆရာတစ်ဦးကို ဘာသာပြန်ခိုင်းလျက် ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးများ ပါရှိရာ မဂ္ဂဇင်းကို စီစဉ်သူအား ပြောလိုက်ပါသေးသည်။ “ဆူဒိုနင်က ပိုကောင်းမှန်းတော့ သိပါတယ်ဗျာ။ ကျုပ်တို့ စာအုပ်က သူ့ မမီပါဘူး”တဲ့။
ပြောလိုသည်မှာ ထိုစာအုပ်ကို ကျွန်တော် ကိုင်နေမှန်း အနှီထုတ်ဝေသူ ကောင်းကောင်းသိပါသည်။ ဈေးကွက်ကို တွက်ချက်တော့လည်း ဖြစ်နိုင်ချေကို သူ တွေးမိပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ရေးသူ ကျွန်တော့်ဘက်က မသွက်တော့ စိတ်က မရှည်နိုင်တော့ဘဲ လူနိုင်တစ်ယောက်ကို ခိုင်းချလိုက်ပုံ ရပါသည်။
သေချာသည်ကတော့ ကျွန်တော့်ဘက်က ထိုစာအုပ်ကို ဆက်လက် ပြန်ဆိုဖို့ဝေးစွ၊ လုံးလုံးကို လှည့်မကြည့်တော့ပါ။ ပြန်ဆိုလက်စတွေကိုလည်း အကုန်ရပ်ချလိုက် ပါသည်။ အနှီထုတ်ဝေသူပြောသလို ကျွန်တော်က ပိုကောင်းချင်လည်း ကောင်းပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်တော်က ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ဖတ်မိရာမှ ခံတွင်း တွေ့သွားသည့်အတွက် စိတ်ပါလက်ပါ ပြန်ဆိုရေးသားခြင်းဖြစ်ပြီး ဟိုတစ်ဖက်သားခမျာမှာတော့ ထုတ်ဝေသူက အပ်သဖြင့် မပြန်ချင်လည်းပြန်၊ ပြန်ချင်လည်း ပြန်ထားရသော ဘာသာပြန် ဖြစ်နေနိုင်သည့်အတွက်ပင်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သူများ ပြန်ပြီးသားစာအုပ်ကို တစ်ဝက်တန်းလန်း ပြန်ပြီးဖြစ်သည့်တိုင် ကျွန်တော် ဆက်ပြန်မနေတော့ပါ။ ကျွန်တော့် အင်အားနှင့် ကျွန်တော့်အချိန်ကို နှမျောမိသလို ကျွန်တော့်မှာ အရှက် ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဟစ်လရီကလင်တန့် ကိုယ်ရေးအထုပ္ပတ္တိသည်လည်း ထိုအတိုင်း ဖြစ်သွားနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။ ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲဆိုလျှင်ဖြင့် မထောင်းတာပါ။ လူများများ ဝင်ပြိုင်လေ၊ ပျော်စရာကောင်းလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အခုဟာက ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲ မဟုတ်ပါ။ စာအုပ်ထုတ်ကြသည့် ဈေးကွက်ထဲက ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ စာအုပ်ဈေးကွက်ကလည်း သိပ်အကောင်းကြီး မဟုတ်ပါ။ အမွှေးတိုင်ဈေးကွက်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်ဈေးကွက်လို ဖြုန်းအား မကောင်းပါ။ သို့ဖြစ်ရာ အမွှေးတိုင်လို၊ ငရုတ်သီးမှုန့်လို သူ့ထက်ငါ တွန်း မလုပ်သင့်ဟု ယူဆပါသည်။ ဆရာများလျှင် သားသေနိုင်သကဲ့သို့၊ ငါးသိုင်းများလျှင် ဟင်းဟုန်သကဲ့သို့ ပြန်ဆိုသူ များပြားလျှင် ထိုစာအုပ်ကို စာဖတ် သူများက “အင်”သွားပါလိမ့်မည်။ အင်လည်း အင်ကုန်သည့်သာဓကတွေ များစွာ ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဤစာဖြင့် ဘာသာပြန်ဖော်များကို ကြေညာလိုက်ပါသည်။ မရှက်တတ်လျှင် လုပြန်ကြပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရှက်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ယောက်ယောက် ဦးသွားသည်နှင့် ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ခရီးရောက်ခဲ့ရောက်ခဲ့ ကျွန်တော်ကပဲ အသာတကြည် (ကျေကျေနပ်နပ်) နောက်ဆုတ်ပေးပါမည်။
စာတိုပေစများကို ဘာသာပြန်ခြင်း (ဝါ) မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်အတွက် အပုဒ်တိုများ ပြန်ဆိုခြင်းမှာတော့ ထိုသို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘာသာပြန်သူတွေ ထပ်နေနိုင်ပါသည်။ အထက်တွင် ဆရာဖေမြင့်၊ ကျွန်တော်နှင့် ဆရာမ မြနှောင်းညိုတို့ သာဓကကိုလည်းကောင်း၊ ဆရာကိုတာ၊ ဆရာကျော်ဝင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့ သာဓကကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြပြီးပါပြီ။
သေချာသည်မှာ စာအုပ်ကို ပြန်ဆိုသကဲ့သို့ အလုအယက် ပြန်ဆိုနေကြတာ မဟုတ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သာဓက ပြခဲ့သော ဆရာများအနက်တွင်လည်း (ကျွန်တော့်ကို ဖယ်လိုက ဖယ်ထားပါဦး) ကျန်ဆရာ၊ ဆရာမများမှာ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် စေတနာများ အသကအသကနှင့် သိက္ခာရှိစွာ ရေးသားနေကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆရာတွေထဲတွင် ငါးပွက်ရာ ငါးစာချတတ်သော အကျင့်မျိုးနှင့် သိက္ခာမဲ့သူ တစ်ဦးမှ မပါပါ။ ထို့ကြောင့်လည်း ထိုဆရာများမှာ သူ့ပရိသတ်နှင့်သူ အခိုင်အမာ ရှိပါသည်။
အပုဒ်တိုများမှာ ဘာသာပြန်များ ရိုးသားစွာ ထပ်နေတတ်သည်ကိုတော့ သဘာဝတစ်ရပ်ဟုပင် ကျွန်တော် မြင်ပါသည်။ ယခင်ကလည်း ထပ်ခဲ့ကြဖူးသလို နောင်တွင်လည်း ထပ်နေပါလိမ့်ဦးမည်။ အထူးသဖြင့် ရင်ခုန်သံချင်း၊ ခံစားချက်ချင်း၊ အကြိုက်ချင်း မနီးရိုးစွဲဖြစ်နေကြသည့် ခေတ်ပြိုင် မွေးဖွားကြီးပြင်းလာရသူများ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဖတ်မိသည့်အထဲမှ အကြိုက်ချင်းတူသည့် အပုဒ်များကို ပြိုင်တူဖြစ်စေ၊ မရှေးမနှောင်း ဖြစ်စေ ပြန်ဆိုဖြစ်သွားကြခြင်းဟု ကျွန်တော် နားလည်ခံယူပါသည်။
လူဆိုတာ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးကြသည်ဟူသော စကားမှာ ဖန်တစ်ရာတေနေသည့် စကားအိုနာကြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် စကားအိုနာတို့၏ ထုံးအတိုင်း သွေးထွက်အောင်လည်း မှန်ပါသည်။
ဘယ်သူ ဘာပြောပြော၊ လက်ရှိအနေအထားတွင် မည်သို့ဖြစ်နေနေ၊ အချိန်ကာလက ဆုံးဖြတ်သွားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျမှ အလုအယက်ပြန်တာတွေ ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မတိုင်မီကတည်းက ပေါလှပါသည်။ ယနေ့ထက်တိုင် ပြန်ထုတ်နေဆဲ၊ ရောင်းကောင်းနေဆဲ ဘာသာပြန် စာအုပ်တွေကို ကြည့်လိုက်လျှင် ထိုအလုအယက်တွေ တစ်အုပ်မှ ပါမလာတာကိုလည်း တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ စာဖတ်ပရိသတ်အပေါ် အမှန်ပင် စေတနာထားကာ ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့သော စာအုပ်များကသာ ခေတ်အဆက်ဆက် တည်တံ့နေသည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း၏ ဦးစံရှားက အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မူရင်း ရှားလော့(ခ်)ဟုမ်း(စ်)ကို ဘာသာပြန်သူတွေ တစ်ယောက်မက ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းကိုသာ ယနေ့ ထက်တိုင် တသသ ဖတ်ဆဲဖြစ်သလို မူရင်းကို ပြန်ဆိုသူများအနက်တွင်လည်း ဆရာမြသန်းတင့်၏ ပြန်ဆိုချက်ကိုသာ စာသမားတွေက အလေးအမြတ်ထားပါသည်။ ကျန်ပြန်ဆိုချက်များကို ဘယ်သူကမှ အမှုမထားတော့ပါ။
ကျွန်တော်တို့မှာလည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အလုအယက်ပြန်ကြတာတွေ၊ ဦးအောင်လုပ်ချင်သည့်ဉာဉ်တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေနေ၊ ကျွန်တော်တို့ မရှိတော့သည့် နောက်ပိုင်းကျခါမှ သားသမီးမြေးမြစ်များက ကျွန်တော်တို့တွေ၏ “တန်း”ကို သတ်မှတ်ကြပါလိမ့်မည်။ “သေရင်ပြီးပြီ”ဆိုသည်မှာ သေသူ့အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူ အနွယ်တော်များအတွက်ကတော့ မပြီးပါ။ သွားလေသူက စုတ်ပဲ့ရင် စုတ်ပဲ့သလောက်၊ တော်ရင် တော်သလောက် သူ့နောက်မျိုးဆက်တွေမှာ ခံစား၊ စံစားကြရ စမြဲလည်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ကဖြင့် ကျွန်တော့် သားသမီးမြေးမြစ်တွေမှာ ကျွန်တော့်ကြောင့် လူတော မတိုးလေမှာ၊ ခေါင်းမဖော်နိုင်မှာ စိုးလှပါသည်။
အဲဒါက ၂၀၀၂ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ထုတ်ဝေတဲ့ “အချစ်”ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကြေညာချက်ပါ။ အဲဒီ့ ကြေညာချက် ထွက်ပြီးလို့ တစ်နှစ်ခွဲလောက် အကြာမှာ အောက်ပါ ကြေညာချက်က မလွှဲသာ မရှောင်သာ ထပ်ရေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဒါကိုကျတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မေလထုတ် “သရဖူ”မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုတော်မူကြည့်ပေးပါဦး…
ခေါင်းစဉ်ပါအတိုင်း ကျွန်တော့်ဟစ်လရီကို သည်လကစပြီး နားလိုက်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း စာဖတ်သူအပေါင်းအား လေးမြတ် ရိုသေစွာ အစီရင်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အမှားပေါင်းများစွာ ကျူးလွန်ဖူးခဲ့တဲ့အထဲက အမှားကြီးတစ်ခုကတော့ သည် “ဟစ်လရီကလင်တန် ရဲ့ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ”ကို ဘာသာပြန်မိခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာ စပြန်ခါစမှာတင်ပဲ သည်စာအုပ်ကို ကျွန်တော့်ထက် အသက်ရော၊ သမ္ဘာရော၊ ဝါပါ ကြီးရင့်တဲ့ စာရေးဆရာနှစ်ဦးကလည်း ဘာသာပြန်ဖို့ စိုင်းပြင်းလျက်ရှိကြောင်း ကြားသိလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒီ့ကတည်းက ကျွန်တော် အတော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိခဲ့ရပါတယ်။ စာတစ်အုပ်ထဲကို လူ သုံးလေးယောက် ဝိုင်းပြန်ကြတာဟာ အင်အား ဖြုန်းတီးတာပဲလို့ ယူဆမိရလို့ပါ။ အမှန်ဆို ကျွန်တော်တို့ချင်း ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ တသီးတခြား တစ်အုပ်စီ ပြန်ကြမယ်ဆိုရင် စာဖတ်ပရိသတ်အတွက်လည်း အကျိုးရှိ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အင်အားတွေလည်း အလဟဿ မဖြစ်တော့ဘူးလို့ တွေးမိရပါတယ်။ တွေးမိရလို့လည်း သည်အကြောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က အချစ်ဂျာနယ်မှာ ကျွန်တော် ရေးဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
သို့ပေမယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်ကတော့ သရဖူ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပြန်လက်စ ဖြစ်နေတာမို့ အားနာပါးနာနဲ့ လစဉ်ဆက် လက်ပြန်ဆိုဖော်ပြနေခဲ့တာ ပြီးခဲ့တဲ့လအထိ ဆိုရင် နှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
တစ်နေ့ကတော့ စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို အရောက်မှာ အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ ဆရာနှစ်ဦးအနက်က တစ်ဦးရဲ့ လုံးချင်း စာအုပ်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ စာအုပ်က သိပ်မထူလှပါဘူး။ ဈေးလည်း သင့်တင့်တယ်လို့ ဆိုနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ့ စာအုပ်ကို တွေ့တော့ ကျွန်တော် ပျော်သွားတယ်။
မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ပြန်လက်စကို အဲဒီ့စာအုပ်ကို အကြောင်းပြပြီး ရပ်ချလိုက်လို့ ရသွားပြီကိုး။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ အဲဒီ့ဆရာက ကျွန်တော့်ထက် အဆများစွာ ပိုတော်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကသာ နှစ်နှစ်ကျော် အပင်ပန်းခံပြီး ပြန်ဆိုနေတာ စာအုပ်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတောင် ကောင်းကောင်း မပြီးချင်သေးပေမယ့် အဲဒီ့ဆရာရဲ့ လုံးချင်းစာမူကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကတည်းက ပြီးနေပြီလို့ သူ့အမှာစာမှာ ဖတ်ရပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်က ဘာသာ မပြန်တတ် ပြန်တတ်နဲ့ လုံးစေ့ပတ်စေ့နီးပါး လျှောက်ပြန်ခဲ့တာမို့ အခု ကျွန်တော် ပြန်ဆိုခဲ့ပြီးသမျှ မူရင်းစာအုပ်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်လေးကိုပဲ စုပြီး စာအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တောင် ဟိုဆရာ့စာအုပ်ထက် အပုံကြီး ထူသွားနိုင်ပါတယ်။ သည်လောက် ထူထဲတဲ့စာအုပ်ကို အဲသလို တိုတိုကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ပြန်ဆိုနိုင်တာကိုက အဲဒီ့ဆရာရဲ့ အရည်အချင်းပါပဲ။ ကြည့်ရတာ မူရင်းစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံ၊ ဒါမှမဟုတ် ငါးပုံတစ်ပုံလောက်အထိ ခြုံ့ချလိုက်နိုင်ပုံပါပဲ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အရစ်ရှည်လှတဲ့ ဘာသာပြန် အခန်းဆက်ကြီးကို ဘယ်တော့ပြီးမှာလဲလို့ မေးမြန်းနေကြတဲ့ စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများအတွက် ကျွန်တော့်အဖြေကတော့ ရှင်းသွားပါပြီ။ သည်လမှာတင် တိခနဲ ရပ်ချလိုက်ပါပြီခင်ဗျား။
ကျန်တာတွေ သိချင်သေးရင်တော့ အဲဒီ့ဆရာရဲ့ စာအုပ်ကိုသာ ရှာဖတ်တော်မူကြပါလို့သာ ပန်ကြားချင်ပါတယ်။ အဲလို ညွှန်းတဲ့အတွက် အဲဒီ့ဆရာက ကျွန်တော့်ကို လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်တောင် တိုက်ဖော်ရမှာ မဟုတ်သလို အဲဒီ့စာအုပ်ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တိုက်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို စာအုပ်တစ်အုပ်တောင် လက်ဆောင်ပေးဖော်မရမှာလည်း မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ သေချာလှပါတယ်။
နောက်တစ်ခုလည်း ဘယ်သူမှ ရိုက်မစစ်ဘဲ အတိအလင်း မြွက်ဟ ကြေညာလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ အခု သရဖူမဂ္ဂဇင်းမှာ သည်ဟစ်လရီ့ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဆက် လက်ပြန်ဆိုတော့မှာ မဟုတ်သလို ကျွန်တော့်ဘာသာလည်း ဘယ်တော့မှ ဆုံးအောင် ဆက်ပြန်ဆိုမှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ အခုအထိ ရေးပြီးခဲ့သမျှကိုလည်း စာအုပ်အဖြစ် ပြန်လည် ထုတ်ဝေရန် ဘယ်လိုမှ စိတ်ကူးမရှိကြောင်းကို အသိပေးချင်တာပါ။
စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများအနေနဲ့ကတော့ သူ့ဘဝဇာတ်လမ်းကို အမြွက်လောက် ဆက်ပြီး ငုံမိချင်သေးတယ်၊ သူ့စာအုပ် အရသာကို အမြည်းလောက် အဆုံးအထိ ခံစားကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် ဖတ်စရာ လုံးချင်းစာအုပ်တစ်အုပ် ရှိနေပြီမို့ ကျွန်တော်နဲ့စာရင် သိပ်ထောင်းတာမယ် မထင်ပါဘူး။
ကျွန်တော့်မှာတော့ သည်အတွက် စိုက်လိုက်ရတဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန်တွေအတွက် သေလုအောင် နှမျောမဆုံး ဖြစ်နေမိပါတယ်။ နောင်လွဲနောင်ခါ ဘယ်ဘယ်သောအခါမှ နောက်ဆုံးပေါ် လူသိများတဲ့စာအုပ်ကို ပြန်ဆိုဖို့ စိတ်ကူး မရှိတော့အောင် သည်စာအုပ်က ကျွန်တော့်ကို သင်ခန်းစာပေးလိုက်တာမို့ တစ်ဖက်က ပြောရင်တော့ ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်ဖို့ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမလားပဲ။
စကားကြုံခိုက် ပြောရရင် ကျွန်တော့်လက်ထဲကို စာအုပ် သစ်တစ်အုပ် ရောက်လာပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် ဘာသာပြန် ပြီး လုံးချင်းထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “အာရှသားများ စဉ်းစားနိုင်စေ”ကို ရေးတဲ့ စာရေးဆရာရဲ့ စာအုပ်သစ်ပါ။ ထွက်ထွက်ချင်းမှာ အဲဒီ့ စာအုပ်ကို ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထားမှန်း သိနေတဲ့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံသူ မိတ်ဆွေက ကျွန်တော့်ဆီ အရောက်လာပေးပါတယ်။ အပိုင်တော့မဟုတ်ဘူး၊ ခဏငှားတာပါဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဓာတ်ပုံမိတ္တူကူးယူထားလိုက်မိပါတယ်။
မကြာပါဘူး၊ စင်္ကာပူသံအမတ်ကြီးက အာရှသားများ စဉ်းစားနိုင်စေကို ဘာသာပြန်သူဟာ ကျွန်တော်မှန်းလည်း သိသွားရော ကျွန်တော့်ကို ကဒ်ထူဖုံးနဲ့ မူရင်းစာအုပ်ကို လက်ဆောင်ပေးလာပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖတ်ကြည့်တော့လည်း နှစ်သက်လို့ မဆုံးပါဘူး။
သို့သော် ဟစ်လရီတစ္ဆေက ကျွန်တော့်ကို ခြောက်နေဆဲမို့ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ဖို့ လုံးလုံး စိတ်မကူးမိတော့ဘူး။ တစ်နေ့ ကတော့ ပွဲတစ်ပွဲမှာ ဆရာ“ကျော်ဝင်း”နဲ့ ဆုံပါတယ်။ ဆရာက ကျွန်တော့်ကို အဲဒီ့ စာအုပ် ပြန်ပါလား၊ သူ မပြန်ဘူးဆိုပြီး စကား ကမ်းလှမ်းပါတယ်။
အဲဒီ့နေ့ကမှ အဲဒီ့တစ်ခါသာ လူချင်း သေချာဆုံဖူး၊ စကား ပြောဖူးတဲ့ ဆရာ“ကျော်ဝင်း”ကို ကျွန်တော် အလွန် ရိုသေသွားမိရပါတယ်။
အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစာပေနယ်ဟာ ကျဉ်းလှသလို ဘာသာပြန်နေတဲ့ စာရေးသူဆိုတာလည်း လက်ချိုးရေလို့ တောင် ရပါတယ်။ အဲသလို ရှိကြတဲ့အထဲမှာ ဆရာကျော်ဝင်းလို ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကလေးတွေနဲ့သာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ရိုင်းရိုင်းပင်းပင်း ရှိကြမယ်ဆိုရင် ဘယ့်ကလောက်များ ကြက်သရေ မင်္ဂလာ ရှိလိုက်လေမလဲဆိုတာ တွေးမိရပါ တယ်။
အချစ်ဂျာနယ်မှာ သည်အကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် ရေးခဲ့ကတည်းက ကျွန်တော် အတိအလင်း ကြေညာပြီးသားပါ။ သည် ဟစ်လရီရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဘယ်ဆရာရဲ့ လုံးချင်းဖြစ်ဖြစ် ထွက်လာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ကျွန်တော့်ဘက်က နောက်ဆုတ်ပေးမယ်လို့ စာနဲ့ ပေနဲ့ အတိအကျ မြွက်ဟပြီးသားပါ။
အခု လုံးချင်းထွက်လာပြီမို့ ကျွန်တော့်ဟစ်လရီကို နားလိုက်ပါပြီ။
သည်အတွက် စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများအပေါင်းမှာ ကသိကအောင့်တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်သွားရတယ်ဆိုပါရင် မလိမ်မိုး မလိမ္မာ ကျွန်တော်မျိုးမှာသာ တာဝန်ရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကသာ အားလုံးကို ဂါရဝတရား ရှေ့ထားပြီး တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
စာဖတ်သူအပေါင်း ရွှင်ရွှင်ပျပျနဲ့ ဘဝင်ကြကြပါစေသတည်း
xkwfa0ol\_jyóemjzpfonf/ ‘gvnf; udk,fawGUMuHKzl;ygonf/
pmtkyfwdkufBuD;wpfwdkufu o&zlr*¾Zif;wGif azmfjycJhaom uRef awmfh tdrfaxmifa&;aqmif;yg;rsm;udk pkxkwfcsifonf[k ajymygonf/ uRefawmfu tifwifygwifjzpfaeygonf/ t”duuawmh jyef&SmNyD; pkay;&rSm tysif;xljcif; oufoufom jzpfonf/ xkwfa0olu uRef awmfhudk awGUwdkif; avmaqmfwwfovdk uRefawmfuvnf; awGUwdkif; tifwif ygwifvkyfaecJhrdygonf/
Mumawmh xkwfa0olcrsm pdwf&Snf[ef rwlawmhyg/ uRefawmf xHkYydkif;xHkYydkif;ESifh jyefqdka&;om;aeaom tdrfaxmifa&; pmtkyf wpf tkyfudk ,lcsvdkufum [motwdktxGmawGudk jyefqdka&;om;aeonfh q&m wpfOD;udk bmomjyefcdkif;vsuf xkwfa0vdkufygonf/ NyD;awmh uRefawmfhaqmif;yg;rsm; yg&dS&m r*¾Zif;udk pDpOfoltm; ajymvdkufyg ao;onf/ ]ql’dkeifu ydkaumif;rSef;awmh odygw,fAsm/ usKyfwdkY pmtkyfu olY rrDygbl;}wJh/
ajymvdkonfrSm xdkpmtkyfudk uRefawmf udkifaerSef; tESDxkwfa0 ol aumif;aumif;odygonf/ aps;uGufudk wGufcsufawmhvnf; jzpfEdkifacsudk olawG;rdygvdrfhrnf/ odkYaomf a&;ol uRefawmfhbufu roGufawmh pdwfu r&SnfEdkifawmhbJ vlEdkifwpfa,mufudk cdkif;csvdkuf yHk& ygonf/
aocsmonfuawmh uRefawmfhbufu xdkpmtkyfudk qufvuf jyefqdkzdkYa0;pG? vHk;vHk;udk vSnfhrMunfhawmhyg/ jyefqdkvufpawGudk vnf; tukef&yfcsvdkufygonf/ tESDxkwfa0olajymovdk uRefawmf u ydkaumif;csifvnf; aumif;ygvdrfhrnf/ taMumif;rSm uRefawmfu udk,hfoabmESifhudk,f zwfrd&mrS cHwGif;awGUoGm;onfhtwGuf pdwfyg vufyg jyefqdka&;om;jcif;jzpfNyD; [dkwpfzufom;crsmrSmawmh xkwf a0olu tyfojzifh rjyefcsifvnf;jyef? jyefcsifvnf; jyefxm;&aom bmomjyef jzpfaeEdkifonfhtwGufyif/
rnfodkYyifjzpfap? olrsm; jyefNyD;om;pmtkyfudk wpf0ufwef;vef; jyefNyD;jzpfonfhwdkif uRefawmf qufjyefraeawmhyg/ uRefawmfh tif tm;ESifh uRefawmfhtcsdefudk ESarsmrdovdk uRefawmhfrSm t&Suf &dSaom aMumifh jzpfygonf/
[pfv&DuvifwefY udk,fa&;txkyÜwådonfvnf; xdktwdkif; jzpf oGm;EdkifzG,f &dSygonf/ bmomjyefNydKifyGJqdkvQifjzifh raxmif;wmyg/ vlrsm;rsm; 0ifNydKifav? aysmfp&maumif;avjzpfygvdrfhrnf/ tck[mu bmomjyefNydKifyGJ r[kwfyg/ pmtkyfxkwfMuonfh aps;uGufxJu udpö jzpfygonf/ uRefawmfwdkY pmtkyfaps;uGufuvnf; odyftaumif;BuD; r[kwfyg/ tarT;wdkifaps;uGuf? i½kwfoD;rIefYaps; uGufvdk jzKef;tm; raumif;yg/ odkYjzpf&m tarT;wdkifvdk? i½kwfoD;rIefYvdk olYxufig wGef; rvkyfoifh[k ,lqygonf/ q&mrsm;vQif om;aoEdkifouJhodkY? ig;odkif; rsm;vQif [if;[kefouJhodkY jyefqdkol rsm;jym;vQif xdkpmtkyfudk pmzwf olrsm;u ]tif}oGm;ygvdrfhrnf/ tifvnf; tifukefonfhom”uawG rsm;pGm &dSygonf/
xdkYaMumifh þpmjzifh bmomjyefazmfrsm;udk aMunmvdkufygonf/ r&SufwwfvQifvkjyefMuyg/ uRefawmfuawmh &Sufwwfygonf/ xdkYaMumifh wpfa,mufa,muf OD;oGm;onfESifh uRefawmf b,f avmuf c&D;a&mufcJha&mufcJh uRefawmfuyJ tomwMunf (ausauseyfeyf) aemufqkwfay;ygrnf/8/
pmwdkayprsm;udk bmomjyefjcif; (0g) r*¾Zif;? *sme,ftwGuf tyk’fwdkrsm; jyefqdkjcif;rSmawmh xdkodkYrjzpfEdkifyg/ bmomjyefolawG xyfaeEdkifygonf/ txufwGif q&mazjrifh? uRefawmfESifh q&mr jraESmif;ndKwdkY om”uudkvnf;aumif;? q&mudkwm? q&mausmf0if; ESifh uRefawmfwdkY om”uudkvnf;aumif; azmfjyNyD;ygNyD/
aocsmonfrSm pmtkyfudk jyefqdkouJhodkY tvkt,ufjyefqdkae Muwm r[kwfMujcif;yifjzpfygonf/ om”ujycJhaom q&mrsm; teufwGifvnf; (uRefawmfhudk z,fvdku z,fxm;ygOD;) usefq&m? q&mr rsm;rSm pmzwfy&dowftwGuf apwemrsm; toutou ESifh odu©m&Sd pGm a&;om;aeMuolrsm;jzpfygonf/ xdkq&mawGxJwGif ig;yGuf&m ig;pmcswwfaom tusifhrsdK;ESifh odu©mrJhol wpfOD;rS rygyg/ xdkYaMumifhvnf; xdkq&mrsm;rSm olYy&dowfESifhol tcdkiftrm&dSygonf/
tyk’fwdkrsm;rSm bmomjyefrsm; ½dk;om;pGm xyfaewwfonfudk awmh obm0wpf&yf[kyif uRefawmf jrifygonf/ ,cifuvnf; xyfcJhMuzl;ovdk aemifwGifvnf; xyfaeygvdrfhOD;rnf/ txl;ojzifh &ifckefoHcsif;? cHpm;csufcsif;? tBudKufcsif; reD;½dk;pGJjzpfaeMuonfh acwfNydKif arG;zGm;BuD;jyif;vm&olrsm;jzpfonfhtm;avsmfpGm zwfrdonfh txJrS tBudKufcsif;wlonfhtyk’frsm;udk NydKifwljzpfap? ra&S;raESmif; jzpfap jyefqdkjzpfoGm;Mujcif;[k uRefawmf em;vnfcH,lygonf/
vlqdkwm udk,fhordkif; udk,fa&;Muonf[laom pum;rSm zef wpf&mawaeonfh pum;tdkemBuD;jzpfygonf/ odkYaomf pum;tdkem wdkY\_ xHk;twdkif; aoG;xGufatmifvnf; rSefygonf/
b,fol bmajymajym? vuf&dStaetxm;wGif rnfodkYjzpfaeae? tcsdefumvu qHk;jzwfoGm;ygvdrfhrnf/ uRefawmfwdkYacwfusrS tvk t,ufjyefwmawG ay:vmwmr[kwfyg/ uRefawmfwdkY rwdkifrD uwnf;u aygvSygonf/ ,aeYxufwdkif jyefxkwfaeqJ? a&mif; aumif;aeqJ bmomjyef pmtkyfawGudk MunfhvdkufvQif xdktvk t,ufawG wpftkyfrS ygrvmwmudkvnf; awGU&ygvdrfhrnf/ pmzwf y&dowftay: trSefyif apwemxm;um jyefqdka&;om;cJhaom pmtkyfrsm;uom acwftqufquf wnfwHhaeonfvnf;jzpfyg onf/
q&mBuD; a&TOa’gif;\_ OD;pH&Sm;u txif&Sm;qHk; jzpfygonf/ aemufydkif;wGif rl&if; &Sm;avmh(cf)[krf;(pf)udk bmomjyefolawG wpf a,mufru ay:cJhygonf/ odkYaomf q&mBuD;a&TOa’gif;udkom ,aeY xufwdkif woozwfqJjzpfovdk rl&if;udkjyefqdkolrsm;teufwGif vnf; q&mjroef;wifh\_ jyefqdkcsufudkom pmorm;awGu tav; tjrwfxm;ygonf/ usefjyefqdkcsufrsm;udk b,folurS trIrxm; awmhyg/
uRefawmfwdkYrSmvnf; taMumif;aMumif;aMumifh tvkt,ufjyef MuwmawG? OD;atmifvkyfcsifonfhÓOfawG b,favmuf&dSaeae? uRef awmfwdkY r&dSawmhonfhaemufydkif;uscgrS om;orD;ajr;jrpfrsm;u uRef awmfwdkYawG\_ ]wef;}udk owfrSwfMuygvdrfhrnf/ ]ao&ifNyD;NyD}qdk onfrSm aoolYtwGufom jzpfygonf/ usef&pfol tEG,fawmfrsm; twGufuawmh rNyD;yg/ oGm;avolu pkwfyJh&if pkwfyJhoavmuf? awmf&if awmfoavmuf olYaemufrsdK;qufawGrSm cHpm;? pHpm;Mu& pjrJvnf;jzpfygonf/
uRefawmfujzifh uRefawmfh om;orD;ajr;jrpfawGrSm uRefawmfh aMumifh vlawmrwdk;avrSm? acgif;razmfEdkifrSm pdk;vSygonf/
Author lettwebawPosted on 12 November 2009 17 February 2010 Categories Conviction, Reproduction8 Comments on Glimpses on Translations in Burmese Literary World
Author lettwebawPosted on 8 November 2009 17 February 2010 Categories Reproduction, Thoughts5 Comments on The Origin of Jealousy
စာဖတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးပေးပုံ နယ်ပယ်စုံ
တစ်ရက်က ကလေးမလေးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်တယ်။ သူက မိဘမဲ့ ကလေးကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ။ အဲတော့ သူ့မှာ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီး ရှိသတဲ့။ အဲဒါတွေကို အခြေပြုပြီး သူ စာရေးချင်တယ်၊ ဝတ္ထုလေးတွေ ရေးထုတ်ချင်တယ်၊ အဆက်အသွယ် မရှိ၊ ကူညီ လမ်းညွှန်မယ့်သူ မရှိလို့ ကျွန် တော့်ဆီ လှမ်းစာရေးပြီး အကူအညီတောင်းတာပါ။
သူ့စာကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ အဖြေတစ်ခုပဲ ရတယ်။ အဲဒီ့ ကလေးမလေးကို စာများများ ဖတ်ပါလို့ပဲ အရင်ဆုံး တိုက်တွန်းရဦးမယ်ဆိုတာ ထက်ခနဲ သိလိုက်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဆီ ရေးတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပေးစာကိုတောင်မှ ဖတ်ရတာ ချောနေအောင် သူမှ မရေးတတ်ရှာသေးတာပဲ။ ဝတ္ထုရေးတဲ့ အဆင့်နဲ့ အဝေးကြီး လိုသေးတယ်။
ဒါနဲ့ သူပေးထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်အတိုင်း သူ့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ တယ်။ သူက ဘွဲ့ရပါ။ “ညည်း စာစီစာကုံးတွေကို အလွတ်ကျက်ပြီး ဖြေခဲ့တာ မဟုတ်လား”လို့ ကျွန်တော်က မေးတော့ သူက “အဲလိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ့်ဘာသာလည်း စဉ်းစားပြီး ရေးပါတယ်”လို့ ပြောသေးတယ်။ ကျွန်တော် ရယ်မိတယ်။ “အေး… ကိုယ့်ဘာသာ စဉ်းစားပြီး ရေးတာက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အလွတ်ကျက်ထားတဲ့အထဲက ပြန်ရေးတာက ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း မဟုတ်ဘူးလား”လို့ ပြန်မေးလိုက်တော့ သူ ရယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ “ဟုတ်တယ်ဆရာ”လို့လည်း ဝန်ခံတယ်။
အဲဒါပဲ။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ခဏခဏ စဉ်းစားမိတယ်။ အတန်းတွေသာ တစ်တန်းပြီး တစ်တန်းတက်လာတယ်။ မြန်မာစာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်မှာကျတော့ နောက်ဆုံးမှာ စာစီစာကုံး ရေးခိုင်းတဲ့ မေးခွန်းက ပါလာတာချည်းပဲ။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်လို့။ ဘာများ အသုံးတည့်လို့ပါလိမ့် လို့ စဉ်းစားမိတယ်။
အခုတော့ အဲတုန်းက ရေးခဲ့သမျှ ကျွန်တော့်ကို ပြန်အကျိုးပေးနေတာ ဒက်ထိ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အင်္ဂလိပ်စာ စာစီစာကုံးတို့၊ ပေးစာတို့ကို တစ်သက်လုံး အလွတ်မကျက်ခဲ့ဖူးဘူး။ တစ်ခါမှလည်း အဲဒီ့ အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် မသွားခဲ့ဖူးဘူး။ အတန်းထဲမှာ ရေးခိုင်းတဲ့အခါ လက်တွေ့သလို ချရေးဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ အင်္ဂလိပ်စာလို ကိုယ့်မိခင်ဘာသာ စကားမဟုတ်တာနဲ့ ရေးရမယ့် စာစီစာကုံးတွေ၊ ပေးစာတွေကိုတောင်မှ အလွတ်မကျက်ခဲ့၊ ကြိုတင် မပြင်ဆင်ခဲ့တာ၊ မြန်မာစာဆို သာတောင်မှ ဝေးသေးတယ်။
စာမေးပွဲ ဖြေရမယ့်နေ့တွေမှာ အပေါ့ပါးဆုံးက မြန်မာစာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဖြေရမယ့်နေ့တွေပဲ။ အဲဒီ့မတိုင်ခင်နေ့မှာ စာကျက်တဲ့အလုပ်ကို သိပ် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သည်လိုပဲ ဟေးလားဝါးလား၊ ဝတ္ထုအဖတ်မပျက်၊ ရုပ်ရှင် ကြည့် မပျက်နေခဲတယ်။ အိပ်ဖြေတောင် အောင်မယ့် ဘာသာတွေလို့ကိုယ့် ဘာသာ ယုံကြည်နေခဲ့သလို တကယ်လည်း အဲဒီ့ဘာသာတွေမှာ တစ်ခါဆို တစ်ခါမှ အမှတ်မနည်းခဲ့တဲ့အပြင် ဂုဏ်ထူး မရတောင် ဂုဏ်ထူးမှတ်နား ပွတ်ခါသီခါချည်းပဲ ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက၊ စာဖတ်တတ်တဲ့အရွယ်က တည်းက စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထကို စွဲမြဲနေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဘွားက မျက်စိကွယ်နေတယ်။ ကြီးမှ မျက်စိကွယ်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် သူက စာတတ်တယ်။ မျက်စိကွယ်နေတဲ့အဘွားကို စာဖတ်တတ်စ အရွယ်ကတည်းက နေ့စဉ်သတင်းစာကို ဖတ်ဖတ်ပြရတယ်။ အသံထွက် မှားနေတာ၊ ကျွန်တော် မဖတ်တတ်တာတွေကို အဘွားက ပြင်ပေး၊ သင်ပေးခဲ့တယ်။ အဲလိုနဲ့ စာဖတ်ခြင်းဓလေ့ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘဝထဲမှာ သံမှို နှက်ထားသလို အလိုလို စွဲမြဲနေပါတော့တယ်။
သည်အခါမှာ အခုကာလ လူငယ်အတော်များများမှာလို “စာဆိုတာ ကြောက်စရာ”ဆိုတဲ့ အစွဲက ကျွန်တော့်မှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက မရှိဘူး။ “စာဆိုတာ ခင်တွယ်စရာ”ဆိုတဲ့ အသိကသာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ကိန်းနေတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော့်မေမေကိုယ်တိုင်က စာတအားဖတ်တာပါ။ မေမေဟာ ၂၀ဝ၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ သူ မကွယ်လွန်ခင် တစ်ပတ်၊ အိပ်ရာထဲ ဗုံးဗုံးမလဲခင်အထိ စာအုပ်တွေကို စွဲစွဲလန်းလန်း ဖတ်သွားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အဲသလို စာဖတ်တဲ့ မအေက မွေးထားတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက စာအုပ်တွေနဲ့ ယဉ်ပါးခဲ့တယ်။ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဝတ္ထုတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အဖော်ကောင်း အဖော်မွန်တွေ၊ ကစားဖက်တွေ၊ ဖွားဖက်တော်တွေ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အဲသလို စာဖတ်အားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်တွေကို ကျွန်တော် မကြောက်မိတော့တာပါ။ အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာမှာလည်း ဖတ်အားက ကျွန်တော့်ကို အကျိုးပြုခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော့် မိသားစုဟာ အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုရေးသားနိုင်တဲ့ မိသားစုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အဖေက ဟိုခေတ်က ခုနစ်တန်းလောက်အထိပဲ ကျောင်းနေခွင့်ရခဲ့တဲ့သူ။ အမေက အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဆယ်တန်းကို အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ကျခဲ့တဲ့သူ။
သို့ပေမယ့် အဖေက အင်္ဂလိပ်စာ သိပ်တတ်ချင်ခဲ့သလို အမေကလည်း သာသနာပြုကျောင်းမှာ ဟိုခေတ်ဆယ်တန်းအထိ နေခဲ့တဲ့သူပီပီ အင်္ဂလိပ်စာကို အထိုက်အလျောက်တော့ သိကြပါတယ်။ သည်အခါမှာ သူတို့ကလည်း ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာတတ်ရေးကို အားပေးခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း မူလက စာမကြောက်တဲ့ စိတ်နဲ့ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာစကား မဟုတ်ပေမယ့် စာအဖြစ်ပဲ မြင် တယ်။ အဲတော့ ဖတ်ဖြစ်တယ်။
ကြွားတယ်ပဲ မှတ်ချင်မှတ်ပါ။ ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘဝကစပြီး ကျွန်တော့်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းကို အင်္ဂလိပ်လိုတွေ ရေးနေပါပြီ။ အခုနေ ပြန်ကြည့်ရင် အမှားတွေ တင်းကြမ်းနဲ့ဖြစ်နေမှာပါ။ သို့သော် ရေးရဲတဲ့ စိတ်က ဆောင်နေတာကို ပြောလိုရင်းပါ။ အလားတူပဲ၊ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာတွေကိုလည်း မဖြစ်မနေ ဖတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ခေတ်က ဂါးဒီးယန်း နေ့စဉ်သတင်းစာပါ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသားက တော်တော့်ကို ကောင်းတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးတယ်။ ရောကျော် ကပြားအင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် ရှစ်တန်းမှာ အဖေက ကျွန်တော့်ကို အဲဒီ့သတင်းစာထဲက တစ်နေ့သတင်း တစ်ပုဒ်နှုန်း ဖတ်ဖြစ်အောင် သူ့ရဲ့ အာဏာကို သုံးပြီး ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
[ကပြား အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာ မြန်မာစကားကနေ ဇွတ်ပြန်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဆိုကြပါစို့။ Essays of the Distinction Winners ဆိုတာ ကပြား အင်္ဂလိပ်စာပါ။ တစ်နည်းပြောရရင် အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်တဲ့သူ ရေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာပါ။ အဲဒီ့ စကားစုမှာ ဘာမှ မမှားပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် နေ့စဉ်ပြောဆို သုံးစွဲနေသူတွေ ဘယ်တော့မှ မပြောမယ့် မရေးမယ့် စကားစုသာဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာလို “ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်”လို့ ပြောတာမျိုးဆန်ဆန် အင်္ဂလိပ်စာပါ။ (ဘယ်မြန်မာကမှ ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်လို့ မပြောဘူးလေဗျာ။) “ဂုဏ်ထူးရသူများ၏ စာစီစာကုံးများ”ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားလုံးကို ဇွတ်အတင်း ဖျစ်ညှစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို ရေးလိုက်တဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာအစစ် မဟုတ်တော့ဘဲ ရောကျော် (ဝါ) ကပြား အင်္ဂလိပ်စာသာဖြစ်သွားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို တကယ် ကျွမ်းကျင်တတ်ပွန်သူသာဆိုရင်တော့ အဲဒီ့စာစုကို Essays of High-Flyers လို့သာ ပြန်ဆိုကောင်း ပြန်ဆိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါ စကားချပ်ပါ။]
ကျွန်တော်ကလည်း သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း ဖတ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဆိုလည်း အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ နေလာလိုက်တာ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေကို စတင် ဖတ်ရှုတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲသလို စာကို တစိုက်မတ်မတ်၊ မပြတ်ဖတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဟာ ဘယ်အတန်းမှာမှ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာကို ကြောက်စရာလို့ မအောက်မေ့မိခဲ့ဘူး။
ပြောချင်တာက စာဖတ်ခြင်းက ကျွန်တော့်ကို အခုအရွယ်အထိလည်း ကောင်းစွာအကျိုးပြုနေဆဲပါပဲ။
ကျွန်တော် ဘာမှ မတတ်ပါဘူး။ ဆရာဝန်ပညာလည်း မတတ်၊ အင်ဂျင်နီယာပညာလည်း မတတ်၊ ကွန်ပျူတာပညာလည်း မတတ်၊ ရုပ်ရှင်ပညာလည်း မတတ်၊ ဂီတပညာလည်း မတတ်၊ လက်သမားပညာလည်း မတတ်၊ အပ်ချုပ်ပညာလည်း မတတ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရယ်လို့ ဘာဆိုဘာမှ မည်မည်ရရ မတတ်တာ အမှန်ပါ။ ကျွန်တော် တတ်(သလိုလိုရှိ)တာ တစ်ခုတည်းပါပဲ။ အဲဒါကတော့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မြန်မာစာ တတ်(သလိုလိုရှိ)တာပါ။ အဲဒါလေးနဲ့ပဲ ကျွန်တော် တစ်သက်လုံး လုပ်စားခဲ့သလို ယနေ့ထက်တိုင်လည်း လုပ်စားနေဆဲပါပဲ။
စာရေးတဲ့ဘက်မှာ ပြောဦးမလား။ ကျွန်တော် စာရေးတတ်တယ်ဆိုတာတော့ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ထဲရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့် စာရေးသက်က အခိုင်အမာ ပြဆိုနေပါလိမ့်မယ်။ သည့်ထက်တစ်ဆင့် တက်ရရင် ကျွန်တော်ပြောဆို ဆွေးနွေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ တွေးစရာတွေ ဘယ်က ရလာခဲ့တာလဲလို့ မေးရင် ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဖတ်ရှုနေတဲ့ စာအုပ်တွေထဲကသာ ရနေတာပါ။
၁၉၈၈ခုနှစ်ကတည်းက ကွန်ပျူတာဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော် စတင်ထိ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့်ကို သင်ပေးတဲ့သူက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ပါ။ သူကလည်း ကျွန်တော့်ထက် အလုပ် ဝင်တာ စောလို့သာ ကိုင်တွယ်တတ်နေတယ်၊ စာရိုက်တာ၊ ပုံနှိပ်တာ လောက်ပဲ တတ်တဲ့သူ။ သူပြပေးလို့ စာရိုက်တတ်၊ ပုံနှိပ်တတ်တဲ့အဆင့် ကို ကျွန်တော် သိခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်း ကွန်ပျူတာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကိုင်တွယ် သုံးစွဲ လာနိုင်တာက ကျွန်တော့်ရဲ့ စာဖတ်မှုကြောင့်ပါပဲ။ အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံး၊ တစ်ကိုယ်ရေ ကွန်ပျူတာ အားလုံးက သုံးစွဲသူနဲ့ ယဉ်ပါးလွယ်အောင် စီမံထားတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သိချင်ရင် သူ့အထဲမှာတင် အဖြေတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က လျှောက်မေးပြီး သူ ဖြေပေးတဲ့ အဖြေတွေကို ဖတ်တတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ အဲသလို ဖတ်ရင်း၊ လျှောက်လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်လောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရုံးရဲ့ ရုံးတွင်းကွန်ပျူတာ ကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးကို ကြီးကြပ်ခန့်ခွဲပေးရတဲ့ အရံစီမံခန့်ခွဲရေးမှူး ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီ့အထိက ဘယ်ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှ မတက်ခဲ့ရဖူးပါဘူး။
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာကို စတင်ကိုင်တွယ်သုံးစွဲပြီးတဲ့နောက် ၁၁ နှစ် နီးပါးအကြာ ၁၉၉၉ခုနှစ်ကျတော့မှ ဘဝရဲ့ ပထမဆုံး ကွန်ပျူတာသင်တန်းကို သွားတက်ခဲ့ရတာပါ။ ပြောချင်တာက စာဖတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးပေးပုံ အဆွယ်အပွားစုံကို ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို လူငယ်လေးတွေ မေးတတ်ကြမြဲ မေးခွန်းပါ။ ဗဟုသုတရမယ့် စာ၊ အသိပညာတိုးမယ့်စာမှ ဖတ်မယ်ဆိုတဲ့သူလည်း ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့်သဘောကတော့ စာမှန်ရင် ဘာစာမဆို ဖတ်သာ ဖတ်ပါလို့သာ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ မဖတ်သင့်တဲ့စာဆိုတာ တစ်မျိုးမှ မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော် ခံယူတယ်။ အဆိပ်အတောက်စာပေ၊ ဘာညာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းတဲ့ ခေတ်မှာ အတော့်ကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ခေတ်က လျှမ်းလျှမ်းတောက်နေခဲ့တဲ့ ယုဝတီခင်စိန်လှိုင်တို့၊ တက္ကသိုလ်တင်မြင့်တို့၊ မောင်မောင်မြင့်လွင်တို့၊ ဆွေလှိုင်ဦးတို့လည်း ဖတ်ခဲ့တာပါပဲ။ အပစ်အခတ်၊ အညှစ်အသတ်နဲ့ အညစ်အပတ်စာပေတွေလို့ တချို့က ပြောကြတယ်။ အဲဒါတွေ ဖတ်ရင် အတုခိုးမှားမယ်၊ လမ်းလွဲရောက်မယ်၊ ဘာညာဆိုတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိလှသော ထင်မြင်ချက်ကြီးကို ကိုင်စွဲပြီး ပြောကြတာပါ။
အဲဒီ့ ထင်မြင်ချက်ဟာ တက်တက်စင်လွဲပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် အဲဒီ့ထင်မြင်ချက်ဟာ ဖတ်သူကို စော်ကားတာပါပဲ။ ဖတ်သူကို ခင်ဗျာ့မှာ မွေးကတည်းက ဦးနှောက်ပါမလာဘူး၊ အဲတော့ အဲသလို စာတွေ ဖတ်ရင် ခင်ဗျားတော့ ရေလိုက်လွဲလိမ့်မယ်လို့ ပြောတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
တကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ သူ့ဦးနှောက်နဲ့သူ၊ သူ့ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ သူပါ။ မကောင်းတာကို မကောင်းမှန်း လူတိုင်းသိကြပါတယ်၊ ဆင်ခြင်သင့်တာကို ဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတာလည်း လူတိုင်းသိပါတယ်။ သည်အခါမှာ ဖတ်တဲ့စာက အဆိပ်အတောက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဖတ်သူက အလိုလို သိပါတယ်။ မကောင်းတဲ့စာကို ဘယ်သူ၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဖတ်မှာတဲ့လဲ။ စာဖတ်သက် ရင့်လာတာနဲ့အမျှ အဲသလို ပေါက်ပန်းဈေးစာတွေကို အလိုလို ပစ်ပယ်လာတတ်ကြတယ်။
မကောင်းတဲ့စာဆိုရင် က… ကန်စွန်းပင် ရေမှာရွှင်၊ ခ… ခရမ်း သီး ဓါးနဲ့လှီးဆိုတဲ့စာကရော ဘာများ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အကျိုးပြုနေ၊ ဗဟုသုတတွေ ပေးနေလို့တုန်း။ သို့ပေမယ့် ဘာသာစကား တိုးတက်ရေးအတွက် အဲဒီ့လှေကားထစ်ကို လူတိုင်း ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတာချည်းပဲ။ အလားတူပဲ၊ စာဖတ်ခြင်းဆိုတဲ့ အလေ့အထတစ်ခု ကိုယ်တွင်းမှာ စွဲမြဲလာဖို့ အရေးမှာလည်း အဲသလို ပေါက်ပန်းဈေးစာတွေက အများကြီးအကျိုးပြုနိုင်ခဲ့မှန်း ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့အရ အခိုင်အမာ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုမှာ Harold Robbins ဆိုတဲ့ စာရေး ဆရာတစ်ယောက်ရှိဖူးတယ်။ သူက အညှီအဟောက် အတော်များများနဲ့ တွေ့ကရာတွေ လျှောက်ရေးတဲ့သူလို့ အကြမ်းဖျဉ်း ဆိုကြပါစို့ရဲ့။ သူ့ဝတ္ထုတွေက တကယ့်အပျော်ဖတ်စာပေ စစ်စစ်ပဲ။ သူကိုယ်တိုင်က အတန်းကျောင်း ကောင်းကောင်းမနေခဲ့ရတော့ သူ့အရေးအသားကလည်း ခပ်ချာချာ၊ ခပ်နုတ်နုတ်ပါ။
သို့ပေမယ့် သူ့စာအုပ်တွေဟာ ကျွန်တော့်ကို အများကြီး အကျိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထု စဖတ်တာ သူ့စာအုပ်တွေက စတာပါ။ သူ့ဝတ္ထုတွေ ဖတ်တာက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ လူငယ်ကြိုက် အညှီအဟောက်တွေ ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ဖတ်လို့ လွယ်တယ်။ သူက စာ သိပ်မတတ်တော့ စာရေးတာ ရိုးစင်းတယ်၊ ရှင်းတယ်၊ နားလည်ဖို့ သိပ်မခက်ဘူး။ အဲတော့ သူ့စာအုပ် ဖတ်ရတာ စာသွားတယ်။
သူ့စာအုပ်တွေနဲ့သာ မစမိခဲ့ရင် “ဟစ်သာငိုတော့ ချစ်တိုင်းပြည်”လို ဂန္တဝင် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိ ကျွန်တော် ရောက်လာခဲ့မှာ မဟုတ်တာလည်း အသေအချာပါ။ အဲတော့ သူ့ကျေးဇူးက ကျွန်တော့် အပေါ်မှာ ရှိပါတယ်။ အလားတူပဲ၊ ဂျက်ဖရီအာချာ၊ ဆစ်ဒနီရှယ်လဒန်၊ ရောဘာ့(ထ်)လဒ်လမ်(မ်) အစရှိတဲ့ ရောင်းအကောင်းဆုံး တန်းဝင်ပေမယ့် စာပေတန်ဖိုးဆိုလို့ တစ်ပြားသားမှ မရှိတဲ့ စာရေးဆရာတွေကလည်း ကျွန်တော့် ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။ သူတို့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ရင်း နုရာက ရင့်လာခဲ့တာဖြစ်သလို စာဖတ်ခြင်းရဲ့ အရသာကိုလည်း ပိုပိုသိလာခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။
ကျွန်တော့်စကားကို ပြန်ချုပ်ပါ့မယ်။ မဖတ်သင့်တဲ့စာ၊ မကောင်းတဲ့ စာဆိုတာ တစ်မျိုးမှ မရှိပါဘူး။ မြင်သမျှ ဖတ်၊ လက်လှမ်းမှီသမျှ ဖတ်ရင်းကနေ နုရာက ရင့်လာကြမယ့်သူချည်းပါပဲ။ လူတိုင်းမှာ ပင်ကိုဉာဏ်နဲ့ ပင်ကို ဆင်ခြင်တုံတရားရှိပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းဟာ အဲဒီ့ ပင်ကိုဉာဏ်နဲ့ ပင်ကို ဆင်ခြင်တုံတရားကို ပိုမိုကျယ်ပြန့် ခိုင်မာလာစေနိုင်ပါတယ်။
သတင်းခေတ်၊ အချက်အလက်နည်းပညာ တစ်ဟုန်ထိုး ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ခေတ်လို့ အခုကာလကို အမည်ပေးထားကြတယ်။ ကမ္ဘာရွာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကလည်း တအားကို တွင်ကျယ်နေတယ်။
အဲဒီ့ခေတ်မှာ စာမဖတ်တဲ့သူဟာ “ကချလာ”ဘဝ၊ သူများနောက်လိုက်ဘဝကို ရောက်သွားရပါလိမ့်မယ်။
စာဖတ်ပါလို့ ပြောတဲ့အခါ လူငယ်အတော်များများက သူတို့အပေါ် မှာ မနိုင်ရင်ကာ ဖိစီးနေတဲ့ ကျောင်းစာတွေနဲ့ ရောထွေးပြီး စာဆိုတာ ကြောက်စရာလို့ မြင်နေမိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါလည်း အဆိုး မဆိုသာလှဘူး။ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်ကာလများက စတင်တွင်ကျယ်လာတဲ့ ကျူရှင်ယူခြင်း အလေ့အထဟာ လူငယ်တွေရဲ့ စာဖတ်ချင်စိတ်ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လုံးပါးပါးသွားစေခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဆယ်တန်းအောင်မှတ်နဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းကို ပိုင်းဖြတ်ပေးနေတာကြီးကြောင့်လည်း မိဘတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေ အပြင်စာဘက် စိတ်ယိုင်သွားမှာကို သေမလောက် ကြောက်နေကြတယ်။ အဲသလို မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စာဖတ်ခြင်း အလေ့အထ မရှိကြလေတော့ကာ သူတို့သားသမီးတွေ အပြင်စာဖတ်ရင်ပဲ ကျောင်းစာ ထိခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ မဟာအစွဲအလန်းကြီးနဲ့ ပိတ်ပင်တားဆီးတတ်ကြတယ်။
လူငယ်တွေကလည်း စာဖတ်လောက်အောင် အချိန်အားမရှိဘူးလို့ ဆင်ခြေကန်ချင်တတ်ကြတယ်။ ပြင်ဦးလွင်မှာ ကျောင်းသွားတက်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်သမီး ဆယ်တန်းဖြေခါနီးမှာ သူ့ဆီကို လစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းတွေ မပို့ပါနဲ့တော့၊ စာကိုပဲ အာရုံစိုက်ရတော့မှာမို့လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် က သူ့စကားကို မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လောက် အချိန်အား မရှိတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် နေ့စဉ် ထမင်းစားနေကြတာဖြစ်သလို ရေအိမ်ထဲလည်း နေ့တိုင်းဝင်ပါတယ်။ ထမင်းစားချိန်မှာလည်း စာဖတ်မယ်ဆို ဖတ်လို့ရသလို ရေအိမ်ထဲ ဝင်နေချိန်မှာလည်း စာဖတ်ဖို့ အချိန်အားက အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဓိကက ဖတ်ချင်စိတ် ရှိနေဖို့သာ လိုရင်းပါ။
စာဖတ်ခြင်းဆိုတာ ဝါသနာ၊ စွဲမြဲလာအောင် လေ့ကျင့်ပါ
ရုပ်ရှင်ဆိုတာ တစ်ကားကြည့်ပြီးတာနဲ့ နောက်တစ်ကား ကြည့်ချင်လာဖို့ ဘာမှ မခက်ပါဘူး။ အလွန်စွဲလွယ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဂိမ်းဆိုတာလည်း အဲသလိုပါပဲ။ တစ်ခါ၊ တစ်ပွဲလောက် ကစားပြီးရင် စွဲသွားပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ကစားဖြစ်ဖို့ ဘာမှ မခက်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က ဘာမှ သိပ် အားစိုက်စရာမှ မလိုတာကိုး။
အချိန်ပေးရတာချင်းအတူတူ စာဖတ်တာကျတော့ အဲသလိုမဟုတ်ဘူး။ အားစိုက်ရတော့ တော်တော်တန်တန်နဲ့ မစွဲလွယ်ဘူး။ အကျင့်လုပ်ယူမှ ရတာ။ တစ်အုပ်ဖတ်ရုံနဲ့ နောက်တစ်အုပ် ဖတ်ဖြစ်ဖို့ ခက်တယ်။ တစ်အုပ်တစ်လေလောက် အရသာရှိရှိ ဖတ်လိုက်ရဦးတောင်မှ နောက်တစ်အုပ်အတွက် အားစိုက်ဖြစ်ဖို့က အင်မတန် ခက်နေတတ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာနဲ့ စာဖတ်ရတာနဲ့ အရသာချင်း မတူပါဘူး။ “ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီး”ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ပဲ ဆိုပါစို့။ ဒါရိုက်တာက မိုးပျံအောင် တော်ပြီး သရုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကလည်း မိုးပျံအောင် ကောင်းနေ၊ ဇာတ်ညွှန်းဆရာကလည်း ဝတ္ထုအရသာ မပျက်အောင် ဇာတ်ညွှန်း ခွဲနိုင်နေတဲ့အတွက် မူရင်း ဝတ္ထုအရသာ မပျက်ပါဘူးလို့ ဘယ်လောက်ပြောပြော ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီးနေရာမှာ စိုးမြတ်သူဇာနဲ့ ရိုက်လိုက်တာဖြစ်ရင် စိုးမြတ်သူဇာအဖြစ်ပဲ မြင်ရပါမယ်။ နန္ဒာလှိုင်နဲ့ ရိုက်တာဆိုလည်း နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ရုပ်ရည် ပြင်ပလက္ခဏာများအတိုင်းသာ တွေ့ရမှာပါ။
အဲဒါကို စာအုပ်အနေနဲ့ ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီးဟာ စိုးမြတ်သူဇာရော၊ နန္ဒာလှိုင်ရော၊ ခိုင်သင်းကြည်ရော၊ သက်မွန်မြင့်ရော ရောယှက်နေပြီး အပြင်မှာ ဘယ်လိုမှ မရှိနိုင်တဲ့ စိတ်ကူးထဲက ဇာတ်ကောင်အသစ်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့ဇာတ်ထဲက တစ်နေရာရာမှာ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်တောင် စိတ်ကူးထဲမှာ ဝင်ပါလို့ ရနေနိုင်ပြန်ပါသေးတယ်။
ရုပ်ရှင်မှာကျတော့ ကိုယ်က အဲဒီ့အထဲ စိတ်ကူးနဲ့ ဝင်ပူးလို့ မရဘူး။ သူ ပြသလောက်ပဲ အကန့်အသတ်နဲ့ မြင်ရပါတယ်။ စာအဖြစ် ဖတ်တဲ့အခါ ကျတော့ စိတ်ကူးထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်သလောက် ချဲ့ထွင်လို့ရတယ်။ အကန့် အသတ်မဲ့သွားတယ်။ အဲဒါကို သတိထားမိမယ်ဆိုရင် စာဖတ်ခြင်းကို ငြင်းဆန်ချင်စိတ် နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း၊ ဆရာသော်တာဆွေတို့ လို ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကောင်းများကို ရေးနိုင်ဖို့အတွက် အဲဒီ့ဆရာကြီးတွေမှာ တစ်ဘဝလုံး ပေးဆပ်ခဲ့ရတာပါ။ တစ်ဘဝတာ အချိန်ယူခဲ့ရတာပါ။ သူတို့အတွက် နှစ်ပေါင်း ၇၀လောက် အချိန်ယူ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို စာအုပ်အဖြစ် ဖတ်ရတဲ့အခါမှာ စာဖတ်သူက အလွန်ဆုံးမှ ခုနစ်ရက်လောက် အချိန်ပေးလိုက်ရင် အပြည့်အဝ သိရနိုင်ပြန်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း စာဖတ်ခြင်းရဲ့ အားသာချက်ပါ။
ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းရဲ့ ဘဝဖြစ်စဉ်၊ ဆရာသော်တာဆွေရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ဘယ်လိုမှ အသေးစိတ် ရိုက်မပြနိုင်ဘူး။ တကယ်လို့ ရိုက်ပြတတ်တဲ့ သူရဲကောင်း ရှိမယ်ဆိုဦးတောင်မှ အဲဒီ့ ဘဝ အတွေ့အကြုံတွေထဲက တစ်ကန့်၊ နှစ်ကန့်လောက်ကိုသာ တစ်နာရီခွဲဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားရဲ့ ကန့်သတ် ကာလအတွင်းမှာ ဖျစ်ညှစ်ထည့်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာမှာက အကန့်အသတ်မရှိဘူး။ ကြိုက်သလောက် အတွဲဆက်လို့ ရတယ်။ ရေးတဲ့သူမှာတင် အကန့်အသတ် မရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ဖတ်တဲ့သူအတွက်ကလည်း အကန့်အသတ်မဲ့တယ်။ ရေးတဲ့သူ ရေးပြထားတဲ့ ဝါကျထက် ကျော်ပြီး ဖတ်တဲ့သူရဲ့ စိတ်ကူးက ဖြန့်ကျက်နိုင်တယ်။
လူငယ်ဆိုတာ အကန့်အသတ်တွေကို မကြိုက်ဘူး၊ လွတ်လပ်မှုကို အငမ်းမရ ဖွေရှာတယ်လို့ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ နိုင်ငံတိုင်းက လူငယ်တွေ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကနေ့ကာလ မြန်မာလူငယ်တွေကတော့ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ကွန်ပျူတာ ကစားနည်းပေါင်းစုံ၊ အင်တာနက်က တွတ်ထိုးခန်း စတာတို့မှာ အချိန်ကုန်ခံရင်း မိမိတို့ရဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ အချုပ်အခြယ် မခံလိုမှုများကို စတေးနေကြတယ်၊ အဆုံးရှုံးခံနေကြတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် မိမိတို့ရဲ့ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားများကို အဲဒီ့ ခေတ်မီနည်းပညာများရဲ့ ခြယ်လှယ်လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လိုလိုချင်ချင်ကြီးကို အသတ်ခံနေကြပါတယ်။
တကယ် လွတ်လပ်ချင်သလား၊ တကယ် အကန့်အသတ်ကို မလိုချင် ဘူးလား။ အဆီးအတားမဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ လူသားများ ဖြစ်ချင်ကြပါသလား။
အဲဒါဆိုရင် အတိုင်းအဆ မရှိ၊ စိတ်ကူးရှိတိုင်း သွားနိုင်တဲ့ စာဖတ်ခြင်း အလေ့အထကို မရမက မွေးမြူယူသင့်လှတယ်လို့ လူငယ်တွေကို ကျွန်တော် အရမ်းပြောချင်နေမိရပါတယ်။
ပြောနေကျစကားကိုပဲ ပြောပါရစေ။ စာမဖတ်တဲ့သူဟာ သူများပြောသမျှ အကုန်လိုက် ယုံနေရတဲ့ လူနုံလူအသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်တဲ့သူမှ ဆင်ခြင်ဉာဏ် ရင့်သန်ပြီး အမှန်အမှားကို ခွဲခြားတတ်နေပါလိမ့်မယ်။ အမှန်အမှားကို ခွဲခြားတတ်ပြီဆိုရင် ပြောတိုင်းယုံတဲ့ လူနုံဘဝက တစ်ဆင့်တက်လာမှာလည်း အသေအချာပါ။
ကိုင်း… စာဖတ်သူ လူငယ် လူကြီးမင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျား။
လူကြီးမင်းတို့ လူနုံမဖြစ်ချင်ကြမှာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာတော့ မိမိတို့ဘာသာ အပိုင်အနိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်သင့်တယ်ထင်တာကို နေ့ပိုင်း ညပိုင်း မရွှေ့ဆိုင်းဘဲ အမြန်ဆုံးအကောင်း အထည်ဖော်ကြပါလော့လို့သာ နှိုးဆော်လိုက်ရကြောင်းပါ။
(၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေတဲ့ Fashion Image မဂ္ဂဇင်းရဲ့ နှစ်ပတ်လည် အထူးထုတ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာပါ။)
Author lettwebawPosted on7November 2009 17 February 2010 Categories Reproduction, Thoughts4 Comments on On Reading
Author lettwebawPosted on4November 20099November 2009 Categories Information2 Comments on Just Met Min Kike Soe San!
Was that Because of Us???
အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ - ၁၀